Dagaal Dhiig badan ku daatay oo u dhaxeeya Beelaha Habar Gidir iyo Biimaal oo kasocda Gobolka Sh/Hoose. - jornalizem
Dagaal Dhiig badan ku daatay oo u dhaxeeya Beelaha Habar Gidir iyo Biimaal oo kasocda Gobolka Sh/Hoose.
Wararka aan ka heleyno Deegaanka Ceel-Wareegow ee Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in halkaasi uu kasocdo dagaal culus oo u dhaxeeya labo beel oo wada Daga Gobolka Sh/Hoose maalmihii ugu dambeeyana u dhaxeesay xurguf Colaadeed.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ee kusugan Qeybo kamid ah Gobolka Sh/Hoose ayaa si toos ah dagaalka uga qeyb qaadanaya kuwaa oo la kala safan labada Maleeshiyo beeleed uu dagaalku u dhaxeeyo.
Dagaalka ayaa ah mid mudooyinkan ka dhacayay deegaano kala duwan oo kuyaala Gobolka Sh/Hoose waxa uuna u dhaxeeyaa Beelaha Biimaal iyo Habar Gadir iyadoona ayna jiraan xubno Odayaal ah iyo xildhibaano Dowlada katirsan oo hurinayay colaada gobolka kasocda ee u dhaxeeya labada Beelood.
Wali si rasmi ah looma oga Qasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee kala gaaray labada ciidan ee dagaalamay iyo shacabka kunool deegaanka uu dagaalku kasocdo.